Aleksandr Ukusineka - a nzima kakhulu, ukhanda elibuhlungu, kodwa okumangalisayo ukuthi egqamile kanye umcabango omuhle. He qamba izinhlamvu kanye nezwe kumnandi captivate romance edlubulundayo, amandla, umusa, isibindi, yangaphandle nobuhle bangaphakathi. Isibonelo salokhu - wako indaba extravaganza "Scarlet Ulibangisa".
Inoveli "I-Scarlet Ulibangisa", sifinyeto esiphila kuso manje ukhumbule, sabhalwa engaphansana nje kwengu-eminyakeni eyikhulu edlule, ngonyaka ka-1922. Nokho, kuze kube manje i-product esizicabangelayo njengezaba ezinhle liculo nemizwa elikhanyayo, bekholelwa wena iphupho lakho, baphendukele ekukhanyeni, uthando nenjabulo, ubulungiswa nethemba. Futhi isithombe main lomkhiqizo - umkhumbi okubomvu, njengoba ekuseni, useyili, - imele abantu abasha umphefumulo futhi inhliziyo, romance, izinkondlo, imizwa enhle Kuyisibopho obusingethwe ukuphila kuyisimangaliso.
ukunakwa kwakho - "Scarlet Ulibangisa": isifinyezo kwendaba, umbhalo isifikisa kumbhali ngamanga Kapernu - a umuzana wokudoba ogwini. Phila kukhona onamandla, abantu ezinzima, impilo kanye nomsebenzi zixhumene ne ingozi njalo, ulwa isici zasolwandle ophambukayo.
Bampofu, kodwa uyaziqhenya futhi namandla emoyeni njengoba Longren, itilosi, isikhathi sakhe esiningi ophoqelelwe expanses amanzi Surf, ukuze baziphilise bona nomkakhe othandekayo uMariya, lokuligugu kwabo esingenantengo kuphela - kancane Assol eyodwa.
Kungakhathaliseki ukuthi khona lifiphele Longren, kungakhathaliseki ukuthi edabukisayo itilosi isinkwa sakhe, ujabula, sibonga umndeni akafuni eziningi. Kodwa isiphetho kuyaqabukela onomusa kwabampofu. Nakuba umyeni wakhe wayengekho ekhaya, uMariya ishiywa ngaphandle penny, lutho ukondla indodakazi yakhe. Yena ezama ambalwa amasenti kusukela umninisitolo wendawo, Menners. Futhi lokho, sibambe a stalemate owesifazane engajabule ukunikela yakhe idili: imali esenana uthando.
Mary enqaba. Enethemba ukubeka zokugcina into eyigugu kancane - indandatho yakhe umshado - into abampofu uya emzini, endleleni lungena ngaphansi imvula, abagulayo nje izinsukwana uya ethuneni.
"Scarlet Ulibangisa", sifinyeto indaba ayikwazi ukundlula leli phuzu iqembu ngoba - isizathu Longren usizi umthombo usizi kwezingane eziningi futhi ilusizi indodakazi yakhe. Lapho itilosi ubuyela ekhaya ukuthi wahlangana yi umakhelwane ithenda ezithandayo futhi Gonna amancane.
Ukuze amatilosi ngeshwa bewile izinsuku kanzima. Washiya ukudoba yakhe, washiya iqembu, wenqaba usizo umakhelwane futhi ekugcineni "kwehla ihange" endlini yakhe agugile kancane, nikela wazikhandla ngokugcwele ukuba nentombazanyana yabo.
Akukhona nje iyonke "Scarlet Ulibangisa" - isifinyezo sezinto ongamtshela ngisho ukuthi yini kwaba umphefumulo bahlushwa Gonna kuya ekuqaleni kuka ubudala-wangaphambili itilosi. Yena bathunga izingubo zakhe, etshela izindaba emangalisayo adventure zayo ocebile wokuphila, futhi le ntombazane ezikhulekelwa uyise matasa kuwo wonke amazwi nge ukunakwa sibonge. Amabili enesizungu, abaphethwe inhliziyo bashada futhi babe ukusekelwa enokwethenjelwa kakhulu futhi qotho komunye nomunye.
ngemva kwezenzakalo evezwe Eminyakeni embalwa wafa Menners: uyithola ishanelwe olwandle oluthukuthele. Longren wabona konke - yini more, umninisitolo wancenga usizo. Besabela kuleso simemo, itilosi Wamkhumbuza indaba kaMariya - ukuthi, futhi, ngathandazela usizo. Ngakho umninisitolo kukhokhelwe baseness yayo yangaphambili. Kodwa edolobhaneni Longren akekho waqonda futhi asekelwe. Wabuka askance ngaso, abazange bakhulume naye, zibuye zesabe lapho lowomuntu esengenile pub ukuphuziswa ka ale kusihlwa. Izingane, kokuba abadala wezwa Gonna axoshwe izinkampani zabo, edelelwa futhi wagconwa. Ngakho kancane kancane amaphupho akho kanye fantasies waba amantombazane induduzo. Nokho - amathoyizi ezimangalisayo ezenziwe ngokhuni - amamodeli we imikhumbi, izikebhe, sailboats (okuyinto benza Longren ukudayiswa). Ngesikhathi le ntombazane esekhulile owayesiza uyise ziyise emzini, esitolo ithoyizi. Uma nababehamba umkhumbi noseyili ebomvu Gonna ukuhlangabezana Eglya ubudala, ngalendoda inganekwane nama-legends. Ukuhlola eduze ngesikhathi intombazane, wabikezela phetho wakhe emangalisayo. Emehlweni yena Gonna ukufunda inkolelo ziphikelele isimangaliso bemlindile. Futhi wamtshela ukuthi usuku olulodwa, lapho ekhula, abavela emazweni angu-elikude priplyvot wakhe ngomkhumbi owodwa ngaphansi njengegazi oseyili. Okuhle, isikhulu yizicukuthwane ngabe ibe ngumkayo, futhi uyakususa kude, kude, ezweni lapho azikho izinyembezi nokudabuka, ezwakala umculo bejabule, futhi abantu bavuma iingoma emangalisayo, lapho bonke ovulekile, inhliziyo enobungane, futhi akekho ophethe itshe esesifubeni sakhe.
"Scarlet Ulibangisa" - indaba ubukhulu nobuhle komphefumulo womuntu, kodwa futhi mayelana meanness zabanye abantu.
I lwendaba yesibili isifikisa endala izindlu ezinhle, kakhokho aristocrats Graev. Ngamunye amalungu uhlobo lwe kwakudingeka bathwale emahlombe abo umthwalo wemfanelo okhokho nenzalo. Kodwa umphefumulo Arthur, ethakazelisayo, okunenjongo, elingenalo ngozankosi ekilasini ubandlululo, imibhikisho esishisayo isiphetho sokuthi balindelwe umfana. He is ezimele, zangamabomu, futhi afuna ukukwenza ngokuphila kwakhe. Anakho, inhliziyo abalungile. Isithombe esibizwa ngokuthi umkhumbi, okwenza indlela kulesi siphepho ukuze osogwini olusenyakatho lwakubo, bethatheka emcabangweni wakhe. Ngoba ngemva ukungqubuzana yasendlini Arthur ushiya endlini kayise. Khona-ke Isiphelo sakhe - alwa yena, ne effeminacy wakhe ahlukile futhi buthakathaka ngokomzimba. Ekugcineni, zokunqoba izinkinga eziningi, Gray waba induna ngomkhumbi owodwa, okuyinto ngiphuphe kokuzindla isithombe enqabeni.
Kusobala ukuthi indaba "Scarlet Ulibangisa" uphela ngokujabula. Arthur Gray - isikhulu owathi Gonna ayinikwa ngaphambili njengokubekwe umvuzo ukholo nothando, inganekwane, nobumsulwa yokucabanga. Futhi Gonna Gray sika - owodwa oqondisayo kuye kwembulwa inkanyezi ukuthi uma enjabulweni.
Heroes babe uyakufanelekela nomunye, futhi oseyili ebomvu iqhakazile phezu kwabo, ukuthatha phezu olwandle futhi imimoya kungalungile nezinye khathizwe.